သမ္မာ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on February 21, 2014 at 1:18pm
သမ္မာ ရဲ့ အနက်ကို အချို့က - Right "ဖြောင့်မတ်သော၊ မှန်ကန်သော" လို့ ပြန်တယ်။ အချို့က "ကောင်းမြတ်သော" လို့ ပြန်တယ်။ သက္ကတဘာသာ အနေနဲ့ သမ္မာကို Samyak လို့ ခေါ်တယ်။ အဲ့ Samyak ရဲ့ အနက်ဟာ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အတွင်းမှာ ငုံခဲနေတဲ့ အနက် ရှိနေတယ်။ အခြား ဘာသာ စကား တစ်ခုကနေ အလွယ်တကူ လုံးကောက် ပြန်ဆိုရ ခက်တယ်။
ဘာလို့ဆို - "မှန်ကန်သော" ဆိုတဲ့ အနက် ပေးရင် - ဒါဟာ "မှားယွင်းသော" ဆိုတာ ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ကြောင်း မြင်ကြလေ့ ရှိကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လည်း အများအမြင်မှာ - အမှန် ဟာ အမှားရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်တယ်။ အမှား ကို ချေဖျက်ရင် အခြား တစ်ဘက်မှာ အမှန် ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဒါဟာ အများရဲ့ ယုတ္တိ အခြေခံ အမြင် ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓရဲ့ အတွင်း ကျတဲ့ ဝေါဟာရ "သမ္မာ" ဟာ အမှား ကို ချေဖျက်တဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တရား မဟုတ်ဘူး။ အမှား နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက် နေတဲ့ အမှန် တစ်ခု မဟုတ်ဘူး။
အမှား တွေက အများကြီး ရှိတယ်။ အမှန် ကတော့ တစ်ခုတည်း။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ သွန်သင်သမျှ ထဲက ကျနော် နားလည်တဲ့ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဧကော ဓမ္မော ၊ တစ်ကြောင်းတည်းသော အမှန် က အမှားတွေ အမြောက်အများ ကို ဘယ်လို ဆန့်ကျင်မှာ တဲ့လဲ။ အမှား ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဟိုမှာဘက်ခြမ်း ဟာ အမှန် မဟုတ်ဘူး လို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။ အမှန်ဟာ အမှားနဲ့ တွဲဖက်နေတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဝင်ရိုးစွန်း မဟုတ်ဘူး။ သံလိုက်တစ်ချောင်းရဲ့ တောင်နဲ့ မြောက် မဟုတ်ဘူး။ အမှောင်နဲ့ အလင်း လို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အဖြည့်ခံ မဟုတ်ဘူး။ အမှား ကင်းဆိတ် သွားတဲ့ အဖြစ် ကိုသာ အမှန် လို့ ခေါ်ဆိုတယ်။ အမှန် ဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက် တရားတွေ ကင်းဆိတ်သွားချိန်၊ သဘာဝနဲ့ ပျော်ဝင် ညီမျှ သွားချိန်မှာ ပကတိ တည်ရှိနေပြီးသား အရာ သာ ဖြစ်တယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း Right is One. Wrongs are millions. အမှားတွေ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိနေပါစေ၊ အမှန်ဟာ တစ်ခုတည်း ရှိနေတယ်။
ရောဂါ ဝေဒနာ ဆိုတာ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ HIV လား၊ တီဘီလား၊ ထိပ်ကပ် နှာစေး လား၊ လေးဘက်နာလား။ ရောဂါ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားပြီး အမည်အမျိုးမျိုး ခွဲထားရတယ်။ မြန်မာအရ ၉၆ ပါး ရှိတယ် လို့ ဆိုတယ်။ သူရို့ ပျောက်ကင်းအောင်လည်း ဆေးအမျိုးမျိုး မတူအောင် ပေးစွမ်းနေရ တယ်။ ဒါပေမယ့် - သူတို့တွေ ပျောက်ကင်း သွားရင်တော့၊ ကျန်းမာတယ် ဆိုတာဟာ တစ်မျိုးတည်း ရှိတယ်။ ကျန်းမာတယ် ဆိုတာ အတွက် အမည်အမျိုးမျိုး ကွဲပြား ရှိမနေဘူး။ ကျန်းမာရေး ၉၆ ပါး မရှိဘူး။ ဖျားနာ ကျန်းမာ၊ နူနာ ကျန်းမာ၊ ကင်ဆာ ကျန်းမာ၊ HIV ကျန်းမာ ဆိုပြီး ခွဲခြား မရှိဘူး။ ရောဂါဝေဒနာ ကင်းရှင်း နေတဲ့ အဖြစ်၊ ဘာရောဂါမှ မရှိနေတာ ကိုက ကျန်းမာနေတာ ဖြစ်တယ်။
(တနည်းအားဖြင့်) ကျန်းမာတယ် ဆိုတာဟာ ရောဂါတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ နားလည်ဖို့ပါပဲ။ ကျန်းမာတယ် ဆိုတာဟာ ရောဂါ တွေရဲ့ ယှဉ်ဖက် တရား မဟုတ်ဘူး။ ရောဂါနဲ့ ကျန်းမာနေတဲ့ အဖြစ်ဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အဖြည့်ခံ မဟုတ်ကြဘူး။
ဆိုပါစို့။ တီဘီ ခံစား နေရတဲ့ လူက နေပြန်ကောင်းလာမယ်။ ငှက်ဖျား ဖြစ်နေတဲ့သူက ပြန် ကျန်းမာလာမယ်။ တီဘီ သမားရော၊ ငှက်ဖျား သမားရော နှစ်ယောက် စလုံး အတွက် ကျန်းမာတယ် ဆိုတာ အတူတူပဲ။ ကျန်းမာတယ် ဆိုတာ အတွက် သူတို့ နှစ်ယောက် သီးခြား ကွဲပြားစရာ မရှိဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ခင်ဗျား - ရောဂါ ကို ဖန်တီးယူ လို့ ရတယ်။ ကျန်းမာတာကို ဖန်တီး ယူလို့ မရဘူး လို့ပဲ ပြောရမယ်။ ရောဂါ ဖြစ်လာဖို့က - မိမိ ကိုယ်ကိုယ် မပြုပြင်ဘဲ မွေးမြူယူလို့ ရတယ်။ (ဝါ) ရောဂါ ကို ဖြစ်ပေါ်အောင် လုပ်လို့ ရတယ်။ ရောဂါ ဖြစ်တယ် မဖြစ်ဘူး က ခင်ဗျား အပေါ်၊ ခင်ဗျားရဲ့ အနေအထိုင်အပေါ်၊ ခင်ဗျား ရဲ့ အကြောင်းခံ အပေါ် မူတည်နေတယ်။ ကျန်းမာရေး သက်သက် ကိုတော့ လုပ်ယူလို့ မရဘူးရယ်။ ဘာလို့ဆို - ရောဂါ ကင်းရှင်းနေတဲ့ အဖြစ် ကိုက ကျန်းမာရေး ဖြစ်နေလို့ပဲ။
အလားတူ Right cannot be invented. It doesn't depend on you. သစ္စာ၊ အမှန် ဟာ ဖန်တီး ယူလို့ မရဘူး။ အကြောင်းက - သစ္စာ အမှန် ဟာ ခင်ဗျားရဲ့ အလို၊ ခင်ဗျားရဲ့ သဘော အပေါ် မှီတွယ် မနေဘူး။ မူလကတည်းက သူ့သဘော သူဆောင် နေလို့၊ မိမိ လိုအင် အပေါ်၊ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ အပေါ် မှီတွယ် မနေလို့ ပဲ။
Meditated on the Discipline of Transcendence.